Imibandela Yokusebenzisa - LucidPix
Kugcine ukubuyekezwa: 05 / 22 / 2020
Le migomo yokusebenzisa ("imigomo") isebenza ekufinyeleleni kwakho nasekusetshenzisweni kwale webhusayithi, noma izinhlelo zokusebenza neminye imikhiqizo eku-inthanethi kanye nezinsizakalo (zizonke, "Izinsizakalo" zethu) ezinikezwe uLucid VR Inc. ("uLucid" noma "thina" ). Ngokufinyelela iwebhusayithi yeLucid noma ukulanda uhlelo lweselula lukaLucid (“LucidPix”), uyavumelana nale migomo. Uma ungavumelani nalemigomo, kufaka phakathi ukulethwa kokulamula okuyimpikiswano kanye nokwehlisa isenzo seklasi eSigabeni 15, ungafinyeleli noma usebenzise izinsiza zethu.
Uma unemibuzo mayelana nale Migomo noma Izinsizakalo zethu, sicela uxhumane nathi ku- info@lucidpix.com.
1. Ukuchazwa Kwezinsizakalo
I-LucidPix iyi-software esekwe kuhlelo lokusebenza esebenzisa ubuciko be-algorithms yokufakelwa ukuguqula izithombe noma amavidiyo akho abe yi-3D ngemininingwane ejulile noma ushintshe ingemuva noma isendlalelo, ukunqamula izinto kufaka imibhalo noma izitika ezahlukahlukene bese usebenzisa isitayela noma imiphumela kusuka kwamanye amafreyimu, izithombe noma amavidiyo . Ama-algorithms we-intelligence yokufakelwa akhiqiza ukujula futhi ahlanganise isithombe sakho nezinhlaka eziphefumlelwe abaklami abahlukahlukene. Uhlelo lokusebenza likuvumela ukuthi (a) uthathe / uguqulele izithombe / amavidiyo e-3D usebenzisa uhlelo noma (b) ulayishe futhi wabelane ngezithombe / amavidiyo akhona kusicelo. Ungangeza nokuhlunga okusha kwe-3D, ozimele noma imiphumela usebenzisa uhlelo lokusebenza noma iwebhusayithi. Ngemuva kwalokho ungasebenzisa imibhalo ehlukile noma isinamatheli ezithombeni nakumavidiyo e-3D. Uma ukhetha uhlaka, ukuhlunga noma umphumela, ubuchule beLucidPix buguqula isithombe / ividiyo. Ungabelana ngezithombe / amavidiyo we-3D ngokusebenzisa amasayithi ahlukahlukene ezokuxhumana noma uwagcine ukuze uwasebenzise mathupha kudivayisi yakho. Ungakhombisa futhi usabalalise ozimele, izihlungi noma imiphumela oyenzile usebenzisa uhlelo lukaLucid noma iwebhusayithi, kuhlelo lweLucidPix.
Kufanele okungenani ube neminyaka eyi-13 ubudala ukufinyelela noma ukusebenzisa izinsizakalo zethu. Uma ungaphansi kweminyaka engu-18 ubudala (noma iminyaka yobuningi bezomthetho lapho uhlala khona), ungangena noma usebenzise izinsizakalo zethu ngaphansi kokuqondisa komzali noma umnakekeli osemthethweni ovuma ukuboshwa ngale mibandela. Uma ungumzali noma umnakekeli osemthethweni womsebenzisi ongaphansi kweminyaka eyi-18 (noma iminyaka yobuningi bezomthetho), uyavuma ukuthi uzibhekele ngokuphelele ngezenzo noma okushiwoyo kwalowo msebenzisi maqondana nezinsizakalo zethu. Uma ufinyelela noma usebenzisa izinsizakalo zethu egameni lomunye umuntu noma ibhizinisi, umele ukuthi ugunyaziwe ukwamukela le migomo egameni lalowo muntu noma lelo bhizinisi futhi lowo muntu noma ibhizinisi livuma ukuthi lizobophezeleka kithi uma wena noma omunye umuntu noma ibhizinisi lephula lemigomo.
3. Ama-Akhawunti Womsebenzisi Nokuphepha Kwe-akhawunti
Uzodinga ukusebenzisa ubuqiniso bakho (isib. Igama lomsebenzisi nephasiwedi) kusuka endaweni yesikhulumi se-intanethi esivela eceleni ukufinyelela kwezinye noma izinsizakalo zethu. Kufanele ugcine ukuphepha kwe-akhawunti yakho yangaphandle futhi usazise ngokushesha uma uthola noma usola ukuthi othile ufinyelele i-akhawunti yakho ngaphandle kwemvume yakho. Uma uvumela abanye ukuthi basebenzise ubuqiniso be-akhawunti yakho, unesibopho semisebenzi yabasebenzisi abanjalo enziwa maqondana ne-akhawunti yakho.
Sicela ubheke kithi Inqubomgomo yobumfihlo ngemininingwane yokuthi siqoqa kanjani, sisebenzisa futhi siveze imininingwane ngawe.
I-5. Okuqukethwe Komsebenzisi
Izinsizakalo zethu zingakuvumela wena nabanye abasebenzisi ukudala, ukuthumela, ukugcina kanye nokwabelana ngokuqukethwe, kufaka phakathi imiyalezo, umbhalo, izithombe, amavidiyo, isoftware nezinye izinto (zihlanganisiwe, "Okuqukethwe Komsebenzisi"). Okuqukethwe komsebenzisi akubandakanyi ozimele abenziwe ngumsebenzisi, izihlungi nemibhalo. Ngaphandle kwelayisense oyinikeza ngezansi, ugcina wonke amalungelo ku naku Okuqukethwe Komsebenzisi, phakathi kwakho neLucidPix. Ngaphezu kwalokho, iLucidPix ayifuni ubunikazi banoma yikuphi okuqukethwe Komsebenzisi okuthumela noma ngokusebenzisa Izinsizakalo.
Unikeza iLucidPix isethi engapheli, engenakuphikiswa, engaphenduki, ebukhosini, emhlabeni jikelele, ekhokhwa ngokuphelele, ilayisense elisebenzisekayo elisebenzisekayo ukusebenzisa, ukukhiqiza kabusha, ukuguqula, ukuguqula isimo, ukushicilela, ukuhumusha, ukudala imisebenzi esuselwa ku, ukusabalalisa, ukuqeqesha, ukwenza esidlangalaleni kanye nokubonisa Okuqukethwe kwakho Komsebenzisi nanoma yiliphi igama, igama lomsebenzisi noma ukufana okunikezwe ngokuqondene nokuqukethwe komsebenzisi kuzona zonke izinhlobo zemidiya neziteshi esezaziwa manje noma ezenziwe kamuva, ngaphandle kwesinxephezelo kuwe. Uma uthumela noma wabelana ngenye indlela Okuqukethwe Komsebenzisi noma ngezinsizakalo zethu, uyaqonda ukuthi Okuqukethwe Komsebenzisi kanye neminye imininingwane ehlobene (efana negama lakho lomsebenzisi, indawo noma isithombe sephrofayili) kuzobonakala emphakathini.
Unikeza imvume yeLucidPix yokusebenzisa okuqukethwe Komsebenzisi, noma ngabe kufaka igama lomuntu, ukufana, izwi noma umuntu, okwanele ukukhombisa ubunikazi bomuntu ngamunye. Ngokusebenzisa izinsizakalo, uyavuma ukuthi okuqukethwe komsebenzisi kungenzeka kusetshenziselwe ukuthengisa. Uyavuma futhi ukuthi ukusetshenziswa kweLucidPix kokuqukethwe komsebenzisi ngezinjongo zokuhweba ngeke kuholele ekulimaleni kwakho noma komunye umuntu omgunyaze ukuthi akwenzele lokho. Uyavuma ukuthi ezinye izinsizakalo zisekelwa imali yokukhangisa futhi zingabonisa izikhangiso nokukhangisa, futhi uyavuma ukuthi uLucidPix angabeka ukukhangisa nokuphromotha kuzinsizakalo noma, cishe, noma ngokuhlangana nokuqukethwe komsebenzisi. Indlela, imodi nobukhulu bokukhangisa nokuphromotha okunjalo kungashintsha ngaphandle kwesaziso esithile kuwe. Uyavuma ukuthi ngaso sonke isikhathi ngeke sikhombe izinsizakalo ezikhokhelwayo, okuqukethwe okuxhaswe, noma ukuxhumana kwezentengiso.
Umela futhi uqinisekisa ukuthi: (i) ungumnikazi wokuqukethwe koMsebenzisi okuguqulwe nguwe ngezinsizakalo noma ngenye indlela unelungelo lokunikeza amalungelo namalayisense abekwe kule Migomo; (ii) uyavuma ukukhokhela yonke imali ekhokhwayo, imali ekhokhwayo, kanye nanoma yiziphi ezinye izindleko ezikhokhwa ngenxa yokuqukethwe komsebenzisi ozifakayo noma ngezinsizakalo; futhi (iii) unelungelo elingokomthetho namandla okufinyelela kule Migomo emandleni akho.
Awungeke wakhe, uthumele, ugcine noma wabelane nganoma yikuphi okuqukethwe komsebenzisi okwephula le migomo noma ongenawo wonke amalungelo afanele okusinika ilayisense elichazwe ngenhla. Yize singenaso isibopho sokuhlola, ukuhlela noma ukuqapha okuqukethwe komsebenzisi, singasusa noma sisuse okuqukethwe komsebenzisi nganoma yisiphi isikhathi futhi nganoma yisiphi isizathu.
Okuqukethwe komsebenzisi okususwe Ezinsizeni kungaqhubeka nokugcinwa yiLucidPix, kufaka, ngaphandle komkhawulo, ukuze kuhambisane nezinye izibopho zomthetho. I-LucidPix akuyona insizakalo yesipele futhi uyavuma ukuthi ngeke uncike Ezinsizakalweni ngezinhloso zesipele sokuqukethwe komsebenzisi noma isitoreji. U-Lucid ngeke abe nesikweletu kuwe nganoma yikuphi ukuguqulwa, ukumiswa, noma ukunqanyulwa Kwezinsizakalo, noma ukulahleka kwanoma yikuphi Ukuqukethwe Komsebenzisi.
6. Ukuziphatha Okuvinjelwe Nokuqukethwe
Ngeke wephule noma yimuphi umthetho osebenzayo, inkontileka, impahla yobungcweti noma elinye ilungelo lomuntu wesithathu noma wenze i-tort, futhi unesibopho sokuziphatha kwakho ngenkathi ufinyelela noma usebenzisa izinsiza zethu. Ngeke:
Bamba iqhaza kunoma yikuphi ukuhlukunyezwa, ukusongela, ukusabisa, nokuhlasela noma ukugoqa;
Sebenzisa noma zama ukusebenzisa i-akhawunti yomunye umsebenzisi ngaphandle kwemvume evela kulowo msebenzisi neLucidPix;
Sebenzisa izinsizakusebenza zethu nganoma iyiphi indlela engaphazamisa, iphazamise, ithinte kabi noma ivimbele abanye abasebenzisi ukuthi bajabulele ngokuphelele Izinsizakalo zethu noma ezingalimaza, zikhubaze, zithwale kanzima noma ziphazamise ukusebenza Kwezinsizakalo zethu nganoma iyiphi indlela;
Buyela emuva unjiniyela nganoma yisiphi isici sezinsizakalo zethu noma enze noma yini engathola ikhodi yomthombo noma idlule noma ahlukanise izindlela ezisetshenziswayo ukuvimba noma ukukhawulela ukufinyelela kunoma iyiphi ingxenye yamasevisi wethu;
Izama ukugwema noma yimaphi amasu wokuhlunga okuqukethwe esiwasebenzisayo noma esizama ukufinyelela noma isiphi isici noma indawo yamasevisi wethu ongagunyaziwe ukufinyelela kuwo;
Thuthukisa noma usebenzise noma yiziphi izinhlelo zokusebenza ezivela eceleni ezihlangana nezinsizakalo zethu ngaphandle kwemvume ebhaliwe yangaphambilini, okufaka noma imiphi imibhalo eklanyelwe ukukrola noma ukukhipha idatha kuzinsizakalo zethu;
Sebenzisa izinsizakalo zethu nganoma iyiphi injongo engekho emthethweni noma engagunyaziwe, noma uhlanganyele, khuthaza noma uthuthukise noma yimuphi umsebenzi ophula lemigomo.
Futhi ungathumela kuphela noma ngenye indlela wabelane ngokuqukethwe komsebenzisi okungeyona eyimfihlo futhi unamalungelo onke okudalula. Awungeke wakhe, uthumele, ugcine noma wabelane nganoma yikuphi okuqukethwe komsebenzisi oku:
Akukho emthethweni, kuyakhulula, kuyacekisa, kuyichilo, kuyizithombe zocansi, kuyichilo, kuwukuhlambalaza, kuyashushisa, kusongela, kuhlasela ubumfihlo noma amalungelo okubonisa obala, ukuhlukumeza, ukuxhaphaza noma inkohliso;
Ukudala, ukukhuthaza noma ukuhlinzeka ngemiyalo yecala lobugebengu, ukwephula amalungelo anoma yiliphi iqembu noma okunye ukudala isikweletu noma ukwephula noma yimuphi umthetho wasekhaya, wombuso, wezwe noma owezwe lonke;
Kungaphula noma yiliphi ilungelo lobunikazi, uphawu lwentengiso, imfihlo yokuhweba, ilungelo lobunikazi noma elinye ilungelo lobuhlakani noma lokuphathelene nanoma yiliphi iqembu;
Kuqukethe noma kubonisa noma yisiphi isitatimende, amazwana noma izimangalo ezingabonisi ukubuka kwakho okuhle kanye nokuhlangenwe nakho kwakho;
Ilingisa, noma igcizelela kabi ukuhlangana kwakho nanoma yimuphi umuntu noma ibhizinisi;
Kuqukethe noma yikuphi ukukhushulwa okungacelwanga, ukukhankasa kwezepolitiki, ukukhangisa noma ukucela;
Kuqukethe noma yiluphi ulwazi oluyimfihlo noma lomuntu siqu lomuntu wesithathu ngaphandle kwemvume yeqembu lesithathu;
Kuqukethe noma yimaphi amagciwane, idatha eyonakalisiwe noma amanye amafayela ayingozi, aphazamisayo noma awonakalisayo noma okuqukethwe; noma
Ingabe, ekwahluleleni kwethu kuphela, kuyaphikiswa noma kuvimbela noma yimuphi omunye umuntu ukuthi asebenzise noma ajabule Izinsizakalo zethu, noma ongadalula uLucid noma abanye ukulimala noma isikweletu sanoma yiluphi uhlobo.
Ngaphezu kwalokho, noma singenasibopho sokuhlola, ukuhlela noma ukuqapha okuqukethwe komsebenzisi, singasusa noma sisuse okuqukethwe komsebenzisi nganoma yisiphi isikhathi futhi nganoma yisiphi isizathu.
7. Ilayisense Elinganiselwe; I-copyright nophawu lwentengiso
Izinsizakalo zethu nombhalo, ihluzo, izithombe, izithombe, amavidiyo, imifanekiso, izimpawu zokuhweba, amagama okuhweba, izihloko zamakhasi, izithonjana zenkinobho, imibhalo, izinsizakalo zensiza, ama-logo, iziqubulo, izihlungi, izihlungi ezikhiqizwa ngumsebenzisi nokunye okuqukethwe okukuwo (kuhlangene, "Okuqukethwe kweLucidPix") kungokwalabo noma banamalayisense kuLucid futhi bavikelwe ngaphansi kwemithetho yase-United States nakwamanye amazwe. Ngaphandle kokuthi kuchazwe ngokucacile kule migomo, uLucid kanye nabanikezeli bethu bamalayisense bagcina wonke amalungelo ku-Insizakalo yethu kanye nokuqukethwe kweLucidPix. Unikezwa ngale ndlela ilayisense elinqunyelwe, elingashintshi, elingashintshi, elingenakubhala, elinokubuyisa ukufinyelela nokusebenzisa izinsizakalo zethu nokuqukethwe kweLucidPix ukuze uzisebenzisele wena; noma kunjalo, leyo layisense ingaphansi kwale Migomo futhi ayifaki noma yiliphi ilungelo: (a) lokuthengisa, lokuthengisa noma lokuhweba ngokusetshenziswa kwezinsizakalo zethu noma okuqukethwe kweLucidPix; (b) ukukopisha, ukukhiqiza kabusha, ukusabalalisa, ukwenza esidlangalaleni noma okubonisa esidlangalaleni okuqukethwe kweLucidPix, ngaphandle kokuthi kuvunyelwe ngokucacile yithi noma ngabanikeli bethu; (c) shintsha okuqukethwe kweLucidPix, susa noma yiziphi izaziso zamalungelo okuphathelene noma amamaki, noma kungenjalo yenza noma yikuphi ukusetshenziswa okuvela kokuqukethwe Kwezinsizakalo zethu noma Okuqukethwe kweLucidPix, ngaphandle kokuthi kubekiwe ngokucacile kule Migomo; (d) sebenzisa noma yiziphi izimayini zedatha, amarobhothi noma izindlela ezifanayo zokubuthwa noma izindlela zokukhishwa; noma (e) sebenzisa izinsizakalo zethu noma okuqukethwe kweLucidPix ngaphandle kokuhlinzekwe ngokuqondile kule Migomo. Noma yikuphi ukusetshenziswa Kwezinsizakalo zethu noma okuqukethwe kweLucidPix ngaphandle kokugunyazwe ngokuqondile lapha, ngaphandle kwemvume ebhaliwe yangaphambilini, akuvunyelwe ngokuphelele futhi kuzonqamula ilayisense elinikezwe ngaphansi kwale migomo. Ngeke ususe, uguqule noma ufihle noma yiliphi ilungelo lobunikazi, uphawu lwentengiso, uphawu lwensizakalo noma ezinye izaziso zamalungelo okuphathelene ezifakwe noma ezihambisana nokuqukethwe kweLucidPix.
Noma yimiphi imibuzo, ukubekwa kwamazwana, ukusikisela, imibono, okwangempela noma okudala noma eminye imininingwane oyithumela ngeLucidPix noma imikhiqizo yethu noma izinsizakalo (ngokubambisana, "Impendulo"), akuyona imfihlo futhi kuzoba ukuphela kukaLucid. Sizoba namalungelo akhethekile, kufaka phakathi, ngaphandle komkhawulo, wonke amalungelo obunikazi bempahla, naku-Impendulo futhi sizonikezwa ukusetshenziswa okungavinjelwe nokusabalalisa Kwempendulo nganoma iyiphi injongo, ukuhweba noma okunye, ngaphandle kokuvuma noma isinxephezelo kuwe.
9. Izikhalazo ze-copyright
Sinenqubomgomo yokunciphisa ukufinyelela Kwezinsizakalo zethu futhi sinqamule ama-akhawunti wabasebenzisi abaphula amalungelo obunikazi bempahla yabanye. Uma ukholelwa ukuthi noma yini kuzinsizakalo zethu iphula noma iyiphi i-copyright okungeyakho noma oyilawulayo, ungazisa i-Agente ekhethwe nguLucid ngokulandelayo: Sicela ubheke i-17 USC §512 (c) (3) ngezidingo zesaziso esifanele. Futhi, sicela wazi ukuthi uma wazi ngamabomu ukuthi noma yimuphi umsebenzi noma okuthile kuzinsizakusebenza zethu kwephula umthetho, ungabekwa icala kuLucid ngezindleko ezithile nomonakalo.
Ngokwezinga eligcwele elivunyelwe ngumthetho osebenzayo, uzofaka, uvikele futhi ubambe uLucid ongenabungozi kanye nesiphathimandla ngasinye, abaqondisi, ama-ejenti, ababambisene nabasebenzi (ngawodwana futhi ngokuhlanganyela, "Amaqembu") avela futhi kunoma yikuphi ukulahleka, isikweletu , funa, ufune, ulimaze, izindleko noma izindleko ("Izimangalo") ezivela noma ezihlobene (a) nokufinyelela kwakho noma ukusebenzisa izinsiza zethu; (b) Okuqukethwe kwakho Komsebenzisi noma Impendulo; (c) ukwephulwa kwakho kwale migomo; (d) ukwephulwa kwakho, ukuphathwa budlabha noma ukuphulwa kwamalungelo amanye amalungelo (kufaka phakathi amalungelo obunikazi bempahla noma amalungelo obumfihlo); noma (e) ukusebenza kwakho maqondana nezinsizakalo zethu. Uyavuma ukwazisa amaPhathi wanoma yiziphi Izicelo Zesithathu, ubambisane namaPhathi ekuvikelekeni kwezimangalo ezinjalo futhi ukhokhe yonke imali ekhokhwayo, izindleko nezindleko ezihambisana nokuvikela izimangalo ezinjalo (kufaka phakathi, kepha kungakhawulelwe, izinkokhiso zabameli). Ubuye uvume ukuthi Amaqembu ayoba nokulawula kokuvikela noma ukukhokhisa noma yiziphi Izimangalo ezivela eceleni. Lesi simangalo singeze futhi, hhayi esikhundleni sazo, noma yiziphi ezinye izibopho ezibekwe esivumelwaneni esibhaliwe phakathi kwakho noLucid noma ezinye izinhlaka.
Asilawuli, asivumeli noma sithathe umthwalo wemfanelo wanoma yikuphi okuqukethwe komsebenzisi noma okuqukethwe okuvela eceleni okutholakalayo noma okuxhumene nezinsizakalo zethu.
Ukusetshenziswa kwakho Kwezinsizakalo zethu kusengozini yakho yodwa. Izinsizakalo zethu zinikezwa "njengoba zinjalo" futhi "zitholakala" ngaphandle kwesiqinisekiso sanoma yiluphi uhlobo, kungacaciswa noma kuveziwe, kufaka, kepha kungagcini lapho, ukuqinisekiswa kwemvume yokuthengisa, ukuqina kwenhloso ethile, isihloko, kanye nokwephula umthetho. Ngaphezu kwalokho, uLucid akavezi noma aqinisekise ukuthi Izinsizakalo zethu zinembile, ziphelele, zithembekile, zamanje noma azinaphutha. Ngenkathi uLucid ezama ukwenza ukufinyelela kwakho nokusetshenziswa Kwezinsizakalo zethu kuphephe, asikwazi futhi asimele noma sivumele ukuthi izinsizakalo zethu noma amaseva angenawo amagciwane noma ezinye izinto eziyingozi. Uthatha ubungozi bonke ngekhwalithi nokusebenza Kwezinsizakalo.
I-12. Umkhawulo Wesikweletu
U-Lucid namanye amaPhathi ngeke babe nesibopho kuwe ngaphansi kwanoma imuphi umbono wesikweletu-noma ngabe ususelwe kwisivumelwano, ukuhlukunyezwa, ukunganakwa, isikweletu esiqinile, iwaranti, noma ngenye indlela - nganoma yikuphi ukungaqondakali, umphumela, izibonelo, ukulimala noma ukulimala okukhethekile noma okulahlekile inzuzo, noma ngabe uLucid noma amanye amaPhathi beye belulekwa ngokuthi kungenzeka lokho kulimala.
Isikweletu esiphelele sikaLucid namanye amaPhathi, sanoma yisiphi isimangalo esivela noma esihlobene nale Migomo noma Izinsizakalo zethu, noma ngabe sinjani isimo, sikhawulelwe enanini elikhokhelwe, uma likhona, nguwe ukufinyelela noma ukusebenzisa yethu Izinsizakalo.
Ukukhawulelwa okuvezwe kulesi sigaba ngeke kubeke umkhawulo noma kungabeki eceleni isikweletu sokunganaki okukhulu, inkohliso noma ukungaziphathi kahle kwenhloso kukaLucid noma amanye amaPhathi noma ezinye izindaba lapho isikweletu singeke sikhishwe noma sikhawulelwe ngaphansi komthetho osebenzayo. Ngaphezu kwalokho, ezinye izinkantolo azivumeli ukubekelwa eceleni noma ukulinganiselwa komonakalo owenzekile noma ongumphumela, ngakho-ke umkhawulo noma ukukhishwa okungenhla kungenzeka kungasebenzi kuwe.
Ngokwezinga eligcwele elivunyelwe ngumthetho osebenzayo, ukhipha amaLucidPix namanye amaqembu weLucidPix kusuka ekuzibophezeleni, isikweletu, izimangalo, izimfuno, kanye / noma ukulimala (okungokoqobo kanye nomphumela) wazo zonke izinhlobo nezinhlobo, ezaziwayo nezingaziwa (kufaka phakathi, kepha kungapheleli ,, izimangalo zokunganaki), okuvela noma okuhlobene nezingxabano phakathi kwabasebenzisi nezenzo noma izinto ezishiywe eceleni. Ukhipha ngokusobala noma yimaphi amalungelo ongaba nawo ngaphansi kweCalifornia Code Code § 1542 kanye nanoma yiziphi ezinye izimiso noma izimiso zomthetho ezijwayelekile ezingeke zikhawulele ukumbozwa kwalokhu kukhululwa ukufaka kuphela lezo zimangalo ongazi noma ongasola ukuthi zizoba sesimweni sakho isikhathi sokuvuma kwalokhu kukhululwa.
14. Idatha yokuHlulisa nokucubungula
Ngokufinyelela noma ukusebenzisa Izinsizakalo zethu, uvuma ukucubungula, ukudlulisa kanye nokugcina imininingwane ephathelene nawe nase-United States nakwamanye amazwe, lapho kungenzeka ukuthi awunawo amalungelo nokuvikelwa okufanayo njengoba wenza ngaphansi komthetho wendawo.
15. Isixazululo Sombango; Ukubopha Okuhlanganayo
Uyacelwa ukuthi ufunde lesi sigaba esilandelayo ngokucophelela ngoba kudinga ukuthi uxazulule izimpikiswano ezithile kanye nezicelo kanye noLucid futhi ukhawule indlela ongafuna ngayo usizo kithi.
Ngaphandle kwezimpikiswano zezimangalo ezincane lapho wena noma uLucid nizama ukuletha isenzo senkantolo yamacala amancane akhiwe esifundeni sakho sokukhokhisa noma izimpikiswano lapho wena noma uLucid sizitholela usizo noma enye impumuzo ngokusetshenziswa okungekho emthethweni kwempahla yengqondo, wena noLucid nidlulisa amalungelo enu enkantolo yamacala futhi nanokuthi kube nanoma iyiphi impikiswano evela noma ihlobene nale Migomo noma Izinsizakalo zethu zixazululwe enkantolo. Esikhundleni salokho, zonke izingxabano ezivela noma ezihlobene nale Migomo noma Izinsizakalo zethu zizoxazululwa ngokuxazululwa okuyimfihlo okugcinwe eSanta Clara County, eCalifornia ngokuhambisana ne-Streamlined Arbitration Rules and Proc inqubo (“Imithetho”) Yenkonzo Yezokugweba Nezokugweba. ("JAMS"), atholakala kuwebhusayithi yeJAMS futhi kulokhu kufakwa ireferensi. Uyavuma futhi uyavuma ukuthi ufunde futhi uqonda imithetho ye-JAMS noma uhoxise ithuba lakho lokufunda imithetho ye-JAMS futhi noma ngabe yikuphi okushiwo ukuthi imithetho ye-JAMS ayilungile noma akufanele ifake isicelo nganoma yisiphi isizathu.
Wena noLucid niyavuma ukuthi noma iyiphi impikiswano evela noma ehlobene nale Migomo noma Izinsizakalo zethu ingeyakho nekaLucid futhi nokuthi noma iyiphi ingxabano izolungiswa kuphela ngokulamula ngakunye futhi ngeke ilethwe njenge-arbitration yeklasi, isenzo sekilasi noma enye into uhlobo lokumelwa okuqhubekayo.
Wena noLucid bayavuma ukuthi le migomo ithinta ukuhwebelana okuphakathi nokuthi ukuphoqelelwa kwalesi Sigaba 15 kuzobuswa kakhulu futhi kulandelwe yi-Federal Arbitration Act, 9 USC § 1, et seq. (i- "FAA"), kufinyelela ezingeni elivunyelwe ngumthetho osetshenziswayo. Njengoba kukhawulelwe i-FAA, le migomo nemithetho ye-JAMS, umlamuli uzoba negunya elikhethekile lokwenza zonke izinqumo ezilandelanayo nezinamandla maqondana nanoma iyiphi impikiswano futhi anikeze noma yiluphi ikhambi elizoba khona enkantolo; inqobo nje, noma kunjalo, umahluleli engenagunya lokwenza ukulamula ngezigaba noma isenzo sokumelwa, esivinjelwe yile migomo. Umlamuli angaqhuba kuphela ukulamula komuntu ngamunye futhi angeke ahlanganise ngaphezu kwezicelo zomuntu oyedwa, angamela noma yiluphi uhlobo lwesigaba noma ummeleli oqhubeka noma ahole noma yikuphi ukuqhubeka kwecala okubandakanya abantu abangaphezu koyedwa. Wena noLucid bayavuma ukuthi kunoma yikuphi ukulamula okuqalayo, uzokhokha imali yokugcwalisa bese uLucid ekhokha imali esele yeJAMS nezindleko. Noma yikuphi ukulamula okuqanjwe nguLucid, uLucid uzokhokha zonke izindleko kanye nezindleko zeJAMS. Wena noLucid bayavuma ukuthi izinkantolo zombuso noma zombuso ezihlangene eSanta Clara County, California zinomthetho okhethekile ngaphezu kwanoma yiziphi izikhalazo kanye nokuphoqelelwa komklomelo wokulamula.
YILUPHI ISIKHALAZO ESIPHUMA KANYE OKANYE SEBENZELWE KULEZI TERMS NOMA IMISEBENZI YAKHO KUFANELE ITHUNYELWE NGEMINYAKA EMINYE NGEMVA KONYAKA NGEMVA KOKUVELA ISIKHALAZO; NGENXA YOKUTHI, ISKOLO SIZOBHALWA NGEMPELA, NGOKUSHO UKUTHI NGESIKHATHI NAWE LUCID NINGEKHONA IBANDLA LOKUTHENGA ISITOLO.
Unelungelo lokuphuma ekuxazululeni okubophayo kungakapheli izinsuku ezingama-30 kusukela ngosuku owamukela ngalo imigomo yalesi Sigaba 15 ngokwazisa uLucid ngokubhala. Isaziso kufanele sithunyelwe ku:
I-Lucid VR Inc., 3120 Scott Blvd, Santa Clara, CA 95054, United States
Ukuze usebenze, isaziso sokuphuma kufanele sifake igama lakho eliphelele futhi sikhombise ngokucacile inhloso yakho yokuphuma ekulameni okubophayo. Ngokuphuma ekuxazululeni okubophayo, uyavuma ukuxazulula izimpikiswano ngokuya ngesigaba 16.
16. Umthetho Ophethe kanye Nendawo
Le migomo nokufinyelela kwakho ekusebenziseni kwethu izinsizakalo zethu kuzolawulwa futhi kuthathwe futhi kugcizelelwe ngokuya ngemithetho yaseCalifornia, ngaphandle kokubheka ukungqubuzana kwemithetho yemigomo noma imigomo (kungaba yaseCalifornia noma olunye uhlangothi) olungadala uhlelo lokusebenza yemithetho yanoma iyiphi enye indawo. Noma iyiphi ingxabano phakathi kwezinhlangano ezingekho ngaphansi kokulamula noma engeke ilalelwe ezinkantolo zamacala amancane izoxazululwa enkantolo yezwe noma yamazwe e-California nase-United States, ngokulandelana, ihleli eSanta Clara County, eCalifornia.
17. Izinguquko kule Migomo
Kungenzeka senze ushintsho kule mibandela ngezikhathi ezithile. Uma senza ushintsho, sizothumela imigomo echitshiyelwe kumasethingi wethu futhi sibuyekeze usuku lokugcina "lokuvuselelwa" ngaphezulu. Singazama futhi ukukwazisa ngokuthumela isaziso se-imeyili kukheli elihlotshaniswa ne-akhawunti yakho, uma ikhona, noma sinikeze ngesaziso ngezinsizakalo zethu. Ngaphandle kokuthi sithi okuhlukile esazisweni sethu, imigomo echitshiyelwe izosebenza ngokushesha futhi ukufinyelela kwakho okuqhubekayo nokusetshenziswa Kwezinsizakalo zethu ngemuva kokuthi sinikeze isaziso kuzokuqinisekisa ukwamukela kwakho izinguquko. Uma ungavumi imigomo echitshiyelwe, kufanele uyeke ukufinyelela nokusebenzisa izinsizakalo zethu.
18. Ezokuxhumana Ngezogesi
Ngoku [dala i-akhawunti yeLucidPix] [ukufinyelela noma ukusebenzisa izinsizakalo], futhi uyavuma ukuthola ukuxhumana nge-elekthronikhi okuvela kuLucid (isb. Nge-imeyili noma ngokuthumela izaziso kuzinsizakalo zethu). Lokhuxhumana kungafaka izaziso nge-akhawunti yakho (isib. Ukugunyazwa kwenkokhelo, izinguquko zephasiwedi nolunye ulwazi lokuthengiselana) futhi kuyingxenye yobudlelwano bakho nathi. Uyavuma ukuthi noma yiziphi izaziso, izivumelwano, ukudalulwa noma okunye ukuxhumana esikuthumela kona ngogesi kuzokwanelisa noma yiziphi izidingo zokuxhumana ezisemthethweni, kufaka phakathi, kepha kungagcini lapho, ukuthi ukuxhumana okunjalo kubhalwe phansi.
Sigodla ilungelo, ngaphandle kwesaziso nangokubona kwethu kuphela, sokuqeda ilungelo lakho lokufinyelela noma lokusebenzisa izinsizakalo zethu. Asinasibopho sokulahleka noma ukulimala okuhlobene nokungakwazi kwakho ukufinyelela noma ukusebenzisa izinsiza zethu.
Uma noma yikuphi ukuhlinzekelwa noma ingxenye yokuhlinzekelwa kwale Migomo ingekho emthethweni, kungasebenzi noma kungaphoqeki, lokho kuhlinzekwa noma ingxenye yokuhlinzekwayo kuthathwa njengengahlukanisiwe kusuka kule Migomo futhi akukuthinti ubuqiniso nokuphoqelelwa kwanoma yikuphi ukuhlinzekwa okusele.
21. Imibandela eyengeziwe Esebenzayo kuma-Amadivayisi we-iOS
Lawa magama alandelayo asebenza uma ufaka, ufinyelela noma usebenzisa izinsiza kunoma iyiphi insiza equkethe uhlelo lokusebenzisa amaselula lwe-iOS (i- "App") eyenziwe ngu-Apple Inc. ("Apple").
Ukuvuma. Uyavuma ukuthi le migomo iphethwa kuphela phakathi kwethu, hhayi ngo-Apple, no-Lucid, hhayi u-Apple, obhekene nohlelo lokusebenza nokuqukethwe kulo. Uyavuma futhi ukuthi imithetho yokusetshenziswa yohlelo lokusebenza ingaphansi kwanoma iyiphi eminye imikhawulo ebekwe kwimithetho yokusetshenziswa yemigomo yokusebenza yesitolo se-Apple App kusukela ngosuku olanda ngalo uhlelo lokusebenza, futhi uma kwenzeka kukhona ukungqubuzana, iMithetho Yokusebenzisa ku-App Store kuzolawula uma kukhawulelwa kakhulu. Uyavuma futhi uyavuma ukuthi uthole ithuba lokubukeza iMithetho Yokusebenzisa.
Ububanzi belayisense. Ilayisense enikezwe yona ikhawulelwe kwilayisense engadluliseki yokusebenzisa i-App kunoma iyiphi i-iPhone, i-iPod touch noma i-iPad onayo noma oyilawulayo njengoba kuvunyelwe iMithetho Yokusebenzisa ebekwe kwimigomo yokusebenza ye-Apple App Store.
Isondlo Nokusekelwa. Wena noLucid niyazi ukuthi i-Apple ayinasibopho sokuhlinzeka ngezinsizakalo zokuyilungiselela neyokusekela maqondana ne-App.
Iwaranti. Uyavuma ukuthi i-Apple ayinacala kunoma yikuphi ukuqinisekiswa komkhiqizo, kungakhathalekile noma kuvezwe ngumthetho, maqondana ne-App. Uma kwenzeka noma ikuphi ukwehluleka kohlelo lokusebenza ukuvumelana nanoma iyiphi iwaranti efanelekile, ungazisa i-Apple, futhi i-Apple izobuyisela intengo yokuthenga, uma ikhona, ekhokhelwe i-Apple ye-App nguwe; futhi ngezinga eliphakeme elivunyelwe umthetho osebenzayo, i-Apple ngeke ibe nesinye isibopho sewaranti maqondana nohlelo lokusebenza. Amaqembu avuma ukuthi ngezinga lokuthi kukhona noma yiziphi amawaranti asebenzayo, noma yiziphi ezinye izimangalo, ukulahleka, izikweletu, ukulimala, izindleko noma izindleko ezibangelwa noma yikuphi ukwehluleka ukuhambisana nanoma iyiphi iwaranti efanelekile kuzoba ngumthwalo wemfanelo kaLucid kuphela. Kodwa-ke, uyaqonda futhi uyavuma ukuthi ngokuhambisana nale migomo, uLucid uzilahlile zonke izinhlobo zewaranti maqondana ne-App, ngakho-ke, azikho iziqinisekiso ezisebenza kuhlelo lokusebenza.
Izimangalo Zomkhiqizo. Wena noLucid niyazi ukuthi phakathi kwe-Apple neLucid, uLucid, hhayi i-Apple, unesibopho sokubhekana nanoma yiziphi izimangalo ezihlobene nohlelo lokusebenza noma impahla yakho kanye / noma ukusetshenziswa kohlelo lokusebenza, kufaka phakathi, kepha kungakhawulelwe ku (a) isimangalo sesikweletu somkhiqizo, (b) noma yisiphi isimangalo sokuthi uhlelo lokusebenza lwehluleka ukuhambisana nanoma yiziphi izidingo zomthetho noma zokulawula ezisebenzayo, futhi (c) izimangalo ezivela ngaphansi kokuvikelwa kwabathengi noma umthetho ofanayo.
Amalungelo Wempahla Yengqondo. Amaqembu ayavuma ukuthi, uma kwenzeka enanoma iluphi uhlangothi lwesithathu abathi uhlelo lokusebenza noma ukutholakala kwakho nokusetshenziswa kohlelo lokusebenza kwephula lelo lungelo lamalungelo obuhlakani besithathu, uLucid, hhayi u-Apple, uzoba nesibopho sokuphenya, ukuvikela, sokukhokha nokukhishwa. kwanoma yikuphi ukwephulwa kwempahla yengqondo kufinyelela ezingeni elidingekayo ngaphansi kwale migomo.
Ukuhambisana Nezomthetho. Ubonisa futhi uqinisekisa ukuthi (a) akutholakalanga ezweni elingaphansi komngcele woHulumeni wase-US, noma oqokwe nguHulumeni wase-US njengezwe "elisekela amaphekula", futhi (b) ubhalwe ohlwini noma yiluphi uhlu loHulumeni baseMelika bamaqembu enqatshelwe noma anqunyelwe.
Igama Lonjiniyela nekheli. Noma yimiphi imibuzo, izikhalazo noma izicelo maqondana nohlelo lokusebenza kufanele ziqondiswe:
Imibandela Yesivumelwano Yesithathu. Uyavuma ukuthobela noma yimiphi imigomo evela eceleni lapho usebenzisa izinsizakalo.
Umzuzi Wenkampani Yesithathu. Amaqembu ayakuvuma futhi ayavuma ukuthi u-Apple, kanye nabaxhasi be-Apple, abahlomula ngokulandela le Migomo, nokuthi, ekwamukeleni kwakho le migomo, i-Apple izoba nelungelo (futhi kuzothathwa ngokuthi ilamukele ilungelo) lokuphoqelela lokhu Imigomo emelana nawe njengomzuzi weqembu lesithathu).
22. Ekuthengeni kohlelo lokusebenza
Ukuthengwa kwe- “Monthly LucidPix Member” kanye ne- “Yearly LucidPix Member” kuzosetshenziswa ku-akhawunti yakho ye-iTunes [ekugcineni kwecala noma i-intro] ekuqinisekisweni. Okubhaliselwe kuzovuselela ngokuzenzakalelayo ngaphandle kokuthi kukhanselwe kungakapheli amahora angama-24 ngaphambi kokuphela kwesikhathi samanje. Ungakhansela nganoma yisiphi isikhathi ngezilungiselelo ze-akhawunti yakho ye-iTunes. Noma iyiphi ingxenye engasetshenziswanga yesivivinyo samahhala izodilizwa uma uthenga okubhaliselwe
Le migomo yakha isivumelwano sonke phakathi kwakho neLucid esiphathelene nokufinyelela kwakho nokusetshenziswa Kwezinsizakalo zethu. Ukwehluleka kukaLucid ukusebenzisa noma ukusebenzisa noma iliphi ilungelo noma ukuhlinzekwa kwale migomo ngeke kusebenze njengokwenqabela lelo lungelo noma ukuhlinzekwa. Izihloko zezigaba kule Migomo zenzelwe ukusebenziseka kalula kuphela futhi azinamphumela wezomthetho noma wenkontileka. Ngaphandle kokuthi kuhlinzekwe ngenye indlela lapha, le migomo ihloselwe ukuzuzisa izinhlangano kuphela futhi ayihloselwe ukunikeza amalungelo okuthola usizo kumuntu wesithathu komunye umuntu noma inhlangano.